Uvimba weoyile waseMelika
Udidi: Ioyile yaseMelika
I-USOIL (i-WTI) Ixhasa iiRali zamva nje, iphinda iqalise i-Uptrend
Ukuhlaziywa: 6 Novemba 2021
USOIL ikwinqanaba eliphezulu. Namhlanje, ixabiso lesalathiso lenza ukunyuka phezulu ukuze liphinde libuyele kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili. Kwinyathelo lexabiso langaphambili, imarike yafikelela phezulu kwi-84.84 yeedola kodwa yachaswa. Isalathiso sifike kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo njengoko abathengisi bevela ukutyhala amaxabiso ezantsi. Imarike inqabile ukuya kwi-$ 78.28 njengoko iinkunzi zenkomo zithenge i-dips.USOIL inyuke kwi-$ 81.55 ngexesha lokubhala. I-uptrend iya kuphinda iqalise ukuba ixabiso liphule ngaphezu kokuchasana kwi-84 yeedola.
I-USOIL ikwinqanaba le-54 le-Relative Strength Index yexesha le-14. Ikwindawo ekwi-uptrend kwaye iyakwazi ukuya phezulu ukuya phezulu. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathisi sihamba phantsi. Ixabiso lesalathisi liphule ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo ukuya kufikelela kwi-78.24 yeedola. Okwangoku, ngo-Oktobha 26 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-38.2% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-WTI iya kuwela kwinqanaba le-2.618 isandiso seFibonacci okanye i-$ 79.09.
I-US30USD ingaphantsi kwe-20% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso siwele kummandla othengisiweyo. Abathengi banokuvela kwindawo ethengiswa kakhulu. Isalathiso sikwisantya esiphezulu. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka.
I-USDOIL ikwi-uptrend. Isalathiso siphinde safumana umfutho we-bullish njengoko iphinda ibuyele ngaphezulu kwe-79.20 yenkxaso. I-WTI iyenyuka ukuze iphinde ifumane ubuphezulu obudlulileyo be-84.84 yeedola.
I-USOIL (WTI) ihamba phambili njengoko i-Index ijolise kwiNqanaba le- $ 86.00
USOIL kukunyuka ukuya phezulu kwaye isalathiso siye saqhubeka sonyuka ngaphezulu. Ukunyuka okukhoyo ngoku kunokwenzeka xa iinkunzi zeenkomo zaphule ukumelana kwinqanaba lama-76 eedola. Isalathiso sikhuphuke saya kwi-82.61 yeedola ngexesha lokubhalwa. Kwitshathi yeveki nganye, umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-USOIL iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le- $ 100.13.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika phezulu zibonisa uptrend. I-USOIL (WTI) ikwinqanaba lama-71 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Oku kubonisa ukuba i-USOIL ifikelele kwingingqi esebenzileyo. Umfutho okhoyo wangoku unokuhla njengoko abathengisi bevela kwingingqi ethengiweyo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso le-WTI likukunyuka okuphezulu. Ngo-Okthobha i-11, isalathiso sajongana nokuchasana kwinqanaba lama-82.15 eedola njengoko i-WTI yenqabileyo isezantsi kwe- $ 79.40. Namhlanje inyathelo eliya phezulu liqhubekile kwicala elingaphezulu.
Ngeli xesha, ngo-Okthobha u-11 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-USOIL iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba lama- $ 86.14.
I-USOIL ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sifikelele kwingingqi ethengiweyo. Ukuqhubela phambili ukuya phezulu kuyathandabuzeka njengoko abathengisi bevela kwingingqi ethengiweyo. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend.
I-USOIL (i-WTI) inyukele phezulu kwaye inyukile yaya kwinqanaba lama- $ 82.47. Nangona isalathiso sifikelele kwingingqi ethengiweyo, i-uptrend inokuqhubeka ukuba imeko yomelele. Eyona nto iphambili kukuba i-USOIL ibinyuka ukusukela ngoNovemba 2020.